America Inoti Zimbabwe Iri Kuda Kuparadza Vanopikisa Munyika
Kurume 23, 2021
Mutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance, VaTendai Biti vakadzingwa muparamende nechimwe chikwata chePDP.
Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica pamwechete nekomiti yedare reseneti muAmerica inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vanoti kudzingwa muparamende kwemumiriri weHarare East, VaTendai Biti pamwe nedzimwe nhengo dzeparamende dzebato rinopikisa reMDC Alliance svondo rapera ndemumwe muenzaniso wehurongwa hwekuda kuparadza bato rinopikisa.
Mugwaro rarakaburitsa neMuvhuro, bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, rakatiwo hurumende yeAmerica iri kutevera zviri kuitika muZimbabwe kusanganisira kudzingwa kwenhengo dzinopikisa mudare reparamende uye kumbunyikidza zvido zvevana veZimbabwe.
Vachinyorawo padandemutande reTwitter, sachigaro vekomiti yeseneti iyi, uye vari mumiriri wedunhu reIdaho, VaJames Risch, vakati hurumende yaVaEmmerson Mnangagwa iri kumbunyikidzawo zvido zvevanhu kuburikidza nekukonzera kudzingwa kwenhengo idzi muparamende.
Svondo rapera chimwe chikwata chebato rinopikisa rePeople’s Democratic Party, (PDP) chakanyorera mutauriri weparamende VaJacob Mudenda chichiti vadzinge nhengo dzinoti VaBiti, VaSettlement Chikwinya (Mbizo); VaWilliam Madzimure (Kambuzuma); VaSichelesile Mahlangu (Pumula); VaRegai Tsunga (Mutasa South); pamwe naVaKucaca Phulu (Nkulumane), richiti vakanga vamira kuve nhengo dzebato iri uye vakanga vasisamiriri zvido zvaro, kunyange hazvo vatanhatu ava vakapinda muparamende pasi peMDC Alliance.
Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekuburitswa kwemashoko, Amai Monica Mutsvangwa, sezvo vanzi nevadaira nharembozha yavo vanga vari mumusangano wemakurukota.
Asi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZanu PF, VaTafadzwa Mugwadi, vanoti mashoko ekomiti yedare reseneti rekuAmerica aya havana nguva yekuapa sezvo isiri chinhu panyaya dzemunyika yeZimbabwe.
VaMugwadi vanoti bato ravo rine zvakawanda zvekuita zvine basa zvakafanana nekurwisana neCovid-19 pane kutevera kusarongeaka kwavanoti kuri mubato reMDC Alliance.
Asi vanoti kupemberera kwavo kuparara kweMDC Alliance kwakangofanana neshumba inenge ichivhima iyo inoti kana yakasangana nemhembwe iri kurwara haiisiyi nekuti iri kurwara, inotofara kuti mudzimu waro bonga kuwana huku dzichirwa.
Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira, VaRejoice Ngwenya, vanoti kunyange hazvo veZanu PF nevari muhurumende vari kuramba kuti havana chekuita nekuparadzwa kwevanopikisa, zvinozivikanwa kuti chinangwa cheZanu PF ndechekuparadza mapato anoipikisa.